Ka Iibso Kaabsoosha Qaxwaha Qaxwaha Dib -u -Celin kara ee Mashiinka Nespresso - Gaadiid Bilaash ah & Canshuur La'aan | WoopShop®
Kaabsoosha Qaxwaha Qaxwaha Dib loo isticmaali karo ee Mashiinka Nespresso
$ 61.99 qiimaha joogtada ah $ 64.99
Color 1daqiiqo Silver Burgundy Brown Red White Blue champagne Black Transparent Purple Clear cagaaran Navy Blue Boor Light Yellow
1daqiiqo Silver Burgundy Brown Red White Blue champagne Black Transparent Purple Clear cagaaran Navy Blue Boor Light Yellow
Kaabsoosha Qaxwaha Qaxwaha Dib loo isticmaali karo ee Mashiinka Nespresso - Guduud gadaal baa laga keenay oo markab sida ugu dhaqsaha badan ayuu u soo noqonayaa markuu kaydka ku soo noqdo
Nooca Filter: Shaandheeyeyaasha dib loo isticmaali karo
Nooca: Kaabsoosha Qaxwaha Qalinka ah ee Dib loo isticmaali karo
Waxyaabaha: ahama steel, caag ah
Nooca: Nespresso kaabsal
brand: Kaabsal loogu talagalay Nespresso Reutilisable Inox Refillable Kaabsal Crema Express Dib Loo Isticmaali Karo Nespresso
Waxyaabaha: Fasalka Cuntada ahama birta. Wanaagsan caafimaadkaaga.
Awoodda: 5g budada Coffee.
Cabbirka: kaabsalka birta, dia sare 37mm, suufka 23mm, Dhererka qiyaastii 25mm.
Qalab: Kaabsalku wuxuu ka samaysan yahay bir birta ka samaysan oo tayo sare leh waana la buuxin karaa oo si nadiif ah loogu nadiifin karaa qalabka la keenay, oo ay ku jirto shaabad beddel
Naqshad Gaar ah: Ku raaxayso qaxwadaada kaabsulka qaxwada dib loo buuxin karo. Waad ku mahadsan tahay tikniyoolajiyadda hal -abuurka leh, waxaad helaysaa qaxwo macaan oo leh kareem weyn.
Samee Quruxdaada DIY: Adeegso qaxwada aad jeceshahay, keydso lacag oo ilaali deegaanka.
Ku isticmaal kaabsalka birta ah ee tayo sare leh mashiinkaaga Nespresso ee taxanaha INISSIA, PIXIE, CITIZ, ...
Qalabyada lagu daray, waxaad si fudud ugu buuxin kartaa kaabsalka biraha aan ka samaysanayn qaxwadaada gaarka ah, shaaha, ama kookaha.
Aad u fiican oo dhakhso leh !!! Shit oo buuxa, shiidi kara oo xun, shiidi weyn ayaa waliba xun. Waxaan soo saaray kaabsoolkaygii, waxaan u diray midkan oo ... kor u kacay boqolkiiba 60 culeyska kaabsalkii caadiga ahaa. Bamka ku jira sameeyaha kafeega waa mid aad u culus. Haa, oo kaabsalku aad buu u kulul yahay
Ku soo gaadhay waqtigii si fiican loo xirxiray mahadsanid woopshop waxaan kugula talinayaa Shaqooyinka si aad ah ayaan ugu faraxsanahay
Talo: laba xabbadood mar qaado. Marka hal kaabsal la shubo, kan labaad wuxuu qaadaa qaxwaha iyo sida kale !!!!, badeecad tayo sare leh oo ka samaysan bir-sare oo bir aan miridhku lahayn. U soo dhawaaday qaxwadahayga qaxwaha. Waxaan iibsanayaa qaxwe. Si aad u dhadhamiso nestrpesso asalka ah.
Badeecad aad u wanaagsan ayaan si dhakhso leh u imid oo xirxirid aad u wanaagsan ayaa ah mid adag oo adag oo si fiican loogu habeeyay mashiinka qaxwada waxaan hubaa inaan mar kale dalban doono
Alaabta sida la xayaysiiyay, tayo fiican leh. Si dhakhso leh u yimid oo ku taliyay woopshop. Mahadsanid